के छ सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ?
बिष्णु निश्चल सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले पति र पत्नी बिच कायम रहेको सम्बन्ध विभिन्न कारणले कानुनी रूपमा अन्त्य हुनेलाई बुझाउँछ । पछिल्लो समय आर्थिक,सामाजिक,धार्मिक कारणले तथा विदेशी संस्कृतिको देखासिकीका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि सम्बन्ध बिच्छेदका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढदै गईरहेका छन् । समाजमा उदाहरण्यि…
मृत्युदण्डको बहस आवश्यकता कि बाध्यता
बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीडकलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतमा बहस जारी छन् । नागरिक स्तरबाट उठिरहेका आवाजलाई अहिले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन् । सांसदहरूले अनौपचारिक समूहसमेत गठन गरेर कानुन परिमार्जन, प्रचारप्रसारलगायत कसरी गर्ने अध्ययनसमेत गरिरहेका छन् । आफ्ना…
बिष्णु निश्चल अहिले दिन प्रतिदिन चेक अनादरका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । चेक अनादरका मुद्धा लिएर अहिले कोही प्रहरी कार्यालयमा कोही अदालतमा न्याय माग्न पुगिरहेका हामीले देखेको छौ । व्यवसायिक कारोबारको क्रममा, लेनदेन व्यबहार मिलाउन तथा रकम ब्याजमा दिने वा सापटि दिएको रकमको सट्टामा चेक लिने दिने प्रचलन बढेको छ…
शंका र झुटो कागजातको भरमा कानूनी कारबाही दु :खद् घटना
डा.चूडाबहादुर श्रेष्ठ १. २०३० साल साउन ३१ गतेदेखि पंक्तिकार नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षार्थी(रिक्रृट) प्रहरी जवानमा सदर प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगञ्ज (हाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) मा तालिमरत थियो । त्यसताका तालिम केन्द्रका कार्यबाहक समादेशक डीएसपी हेमबहादुर सिंह (पछि आईजीपी) थिए । प्रहरी जवानको आधारभूत ६ महिने तालिम समापन भएपछि एसएलसी उर्तीर्ण…